उदयपुरमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच चुनावी तालमेल हुन्छः सभापति तथा मन्त्री कार्की
जनभाव व्युराे बुधबार, चैत २३, २०७८
अगामी बैखाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच देशैभरी चुनावी तालमेल हुने भएको छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत (समाजवादी), जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । देशैभरी गठबन्धनकाबीच हुने चुनावी तालमेल उदयपुरमा के हुन्छ ? कसरी तालमेल हुन्छ ? यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेस उदयपुरका जिल्ला सभापति तथा प्रदेश १ सरकार सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री हिमाल कार्कीसँग जनभाव व्युरोले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
जनभाव डटकममा स्वागत छ ?
अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नु पर्ने कारण के होला ?
पहिलो कुरा, गठबन्धन के का लागि निर्माण भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका परिवर्तन र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धीलाई विभिन्न कोणबाट आक्रमण भयो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेतृत्वको सरकार, जुन ढंगबाट अघि बढ्यो । संविधान विपरितका कामहरु गर्न थाल्यो । दुई/दुई पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर प्रतिगमनको दिशातिर अगाडी बढेको, सबैको सामु प्रष्ट छ । त्यसपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले राष्ट्रिय आवश्यकताको महशुस गरेर, संविधानको रक्षा, मुलुकलाई प्रतिगमनबाट बचाँउनको लागि राष्ट्रिय रुपमा नै निर्माण भएकाे यो गठबन्धन हो । त्यो प्रतिगमनको खतरा अझै पनि छ । त्यसकारण गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच अझै घनिभुत एकता हुनुपर्छ । त्यही एकताको महशुस गरेर नै अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम गरेर जाने भन्ने केन्द्रीय निर्णय छ । त्यही निर्णय अनुसार हामी पनि अघि बढेका छौँ । प्रतिगमनको खतरा नटरेकाले नै, गठबन्धन कायम छ ।
प्रतिगमनको खतरा अझै छ । त्यसो भएकाले प्रतिगमनकाविरुद्ध गठबन्धन एक भएर अघि बढ्छ ?
बढ्छ । तत्कालिन सरकारले (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकार) यो मुलुकलाई जुन ढंगले सञ्चालन गर्न खोज्यो । तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दम्भ, घमण्ड देखाउँदै, गलत ढंगबाट मुलुकलाई डोर्‍याउन खोजेपछि, मुलुकलाई सही दिशा दिनको निम्ती बनेको गठबन्धन हो । त्यसो भएकाले, अब हुने तीनै तहको निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उदयपुरमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच पनि तालमेल हुन्छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उदयपुरमा पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच तालमेलनै हुन्छ । उदयपुरमा गठबन्धनकाबीच बैठक बसेर हदैसम्मको लचकता आपनाएर तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक रुपमा आधिकारिक निर्णय नै भएको छ । तालमेल गरेर जाने भन्ने आधिकारिक निर्णय नै भइसकेको छ । उदयपुरमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच चुनावी तालमेल हुन्छ ।
त्यो सैद्धान्तिक निर्णय कसरी कार्यन्वयन हुन्छ होला ?
जिल्लादेखि पालिका हुँदै वडासम्म हामी छलफल, वहस गरिरहेका छौँ । पालिकाहरुमा पनि, त्यहाँ रहेका गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको कमिटीले तालमेल गरेर नै अघि बढ्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छन् । पार्टीको सांगाठानिक धरातल, मतदाताको मनोभाव, २०७४ सालको प्राप्त मत लगायतलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन सुरु भएको छ । विशलेष्ण सुरु भएको छ । एक प्रकारको कार्यन्वय पनि सुरु भएको छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच एकताबद्ध भएर तालमेल हुन्छ । तालमेलको वहस, छलफल अघि बढेको छ ।
कांग्रेसमा संस्थापन इतरपक्ष गठबन्धनको विपक्षमा छ ? गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गरिरहेको छ नि ?
कांग्रेसभित्र यस विषयमा दुईधार छ । केन्द्रीय समितिले सर्वसहमत निर्णय गरिसकेको छ । आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गरेर नै जाने भनेको छ । जिल्ला तहमा, गाउँ तहमा, टोल तहमा, कस्ले, कुन साथीले के भन्नुहुन्छ, भन्ने होइन् । कुन स्वार्थबाट, कुन उदेश्यबाट गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्दैहुनुहुन्छ ? त्यसको खासै अर्थ छैन् ? कांग्रेसको सबै पालिको संस्थागत बैठकबाट गठबन्धन गरेर जाने निर्णय भइसकेको छ । व्यक्तिगत कुराहरु गौण हुन्छन् । माथिबाट आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गरेर जाने भनेको छ । हाम्रो पनि यहाँ आठवटै पालिकामा गठबन्धन गरेर जाने भनेर निर्णय गरिएको छ । कुन पालिका, कस्को भागमा भन्ने कुराको छलफल भएको छैन् । त्यो पछि हुन्छ ।
चुनावी घोषणा पत्र गठबन्धनको एउटै हुन्छ कि ? दल अनुसार फरक/फरक हुन्छ ?
केन्द्रको घोषण पत्र केन्द्रले जारी गर्छ । स्थानीय स्तरमा हामी आँफैँ जारी गछौँ ।
केन्द्रले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संयुक्त घोषणा पत्र पठाउँछन् त ?
आउन सक्छ । चुनाव संयुक्त रुपमा लडेपछि साझा कार्यक्रमहरु आउनु नै पर्‍यो ।
गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच उदयपुरमा कसरी भागबण्डा हुन्छ ? जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा भागबण्डाको आधार के हुन्छ ?
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिमाण र पार्टीको सांगाठानिक संरचना लगायतका आधारलाई अध्ययन गरेर भागबण्डा हुन्छ । भागबण्डामा समस्या छैन् । यो सहज तरिकाले हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस उदयपुरको जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ । गठबन्धनको बारेमा संस्थापन इतर पक्षका कांग्रेसीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । यदी भोलिका दिनका कांग्रेसको भागमा नपरेको स्थानीय तहमा कांग्रेसका नेताहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरे भने के हुन्छ ?
कारवाही हुन्छ । पार्टीको निर्णय विपरित गए, पार्टीको विधान बमोजिम कारवाही हुन्छ । विधान अनुसार स्वतः कारवाही हुन्छ । गठबन्धनविरुद्ध जान कांग्रेसी कार्यकर्ताहरुलाई छुट छैन । जानु पनि हुँदैन ।
तपाँई प्रदेश १ सरकारको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री पनि हुनुहुन्छ ? तपाँईको नेतृत्वमा रहेको उक्त मन्त्रालयबाट उदयपुर जिल्लामा कस्ता/कस्ता विकास निर्माणका आयोजना आएका छन् ?
प्रदेश सरकार पनि गठबन्धनको सरकार हो । हामी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सकिएपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थियौँ । हामीले उदयपुरलाई मात्र होइन् । प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा नयाँ योजनाहरु लगिरहेका छौँ । हामीले अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनाहरुलाई पनि अघि बढाएका छौँ । काम छिटो र छरितो ढंगबाट अघि बढाउन पहल गरेका छौँ । उदयपुर जिल्लाको हकमा साना/ठूला थुप्रै समस्याहरु छन् । सडकका, खानेपानीका, पुलका समस्याहरु छन् । यही समस्याहरु मेरो मन्त्रालय अन्र्तगत पर्दछन् । मैले उदयपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा, ठोस योजनाहरु ल्याउन पर्छ भन्ने तयारीमा छु । धेरै कुरा गर्न नसकेपनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । ठूला पुल बनाउने कुरामा । नदी नियन्त्रणको कुरामा बढी ध्याँन दिन जरुरी छ । त्यसको लागि आउने आर्थिक वर्षमा उदयपुर जिल्लाका केही नयाँ योजनाहरु समावेश गर्ने तयारीमा छौँ । केही नमुना काम गर्ने गरी प्रदेश १ सरकार अघि बढेको छ ।
तपाँइको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र त्रियुगा हो । त्रियुगा क्षेत्रमा हजुर निर्वाचित भएपछि के–के काम गर्नु भयो ?
मेरो निर्वाचन क्षेत्र त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्र हो । नगरपालिका भएर पनि अत्यन्तै पछाडी परेका टोल तथा बस्तिहरु छन् । मैले त्यही पछाडी पारिएका टोल बस्तिलाई जोड दिने गरेको छु । बहुवर्षे सडकको रुपमा देउरी, श्रीपुर, दमौती, बुर्जाकान्ला, लालपत्ता घनचक्रे, पतले सडक परेको छ । त्यो सडकको अहिले काम भइरहेको छ । त्यही सडकमा पर्ने देउरी खोलामा पुल बनिरहेको छ । खानेपानी योजनाहरुको काम भइरहेका छन् । मेरो क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, पुलहरुको काम धमाधम भइरहेको छ । धेरै काम भएका छन्, भन्दा फरक नर्पला ।
म अन्तिममा गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्‍यो ? किन गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नु पर्यो ? यी सबै कुरा हामी बुझाउँछौँ । तत्कालिन नेकपा एमालेको दुई तिहाईको सरकारले जनताको काम जुन ढंगले गर्नु पर्ने थियो । त्यो गरेन । त्यसो भएकाले यो देशलाई अघि बढाउनको लागि बनेको गठबन्धन हो । २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलनदेखि भनौँ । वा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धको कुरा गरौँ । जनआन्दोलनमार्फत जनयुद्ध गरेको माओवादीलाई पनि शान्तिप्रक्रियामा ल्याउने काम कांग्रेस नै गरेको हो । देशको विकास र सम्बृद्धिलाई पनि कांग्रेसले अघि बढाइरहेको छ । यस गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु सैद्धान्तिक कुराहरु फरक छन् । यो गठबन्धन गर्नु भनेको पार्टी एकीकरण गर्नु पनि होइन् । आ–आफ्नाे नीति विचारलाई यथास्थानमा राखेर, मुलुकको भविष्यको निम्ती बनेको गठबन्धन हो । त्यस कारण स्थानीय पालिकाहरुको भविष्यका निम्ती, जनताको सम्बृद्धिको यात्राको निम्ती, गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर स्थिर सरकार बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सबैको साझा अपनत्व हुनेगरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचित गर्नुपर्छ । हामी जनतालाई यही कुरा बुझाउने छौँ । हामीलाई विश्वास छ । जनताले हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुुहने छ ।
कुराकानीको लागि समय दिनु भयो, हजुरलाई धन्वयवाद !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २३, २०७८, ०७:२९:००